काठमाडौँ, माघ १७: सोमवार नेप्से ४ दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको हो । यस दिन परिसूचक ६५ दशमलव ४४ अङ्क घटेर १ हजार ३ सय ९ दशमलव ७० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । कारोबार रकम भने न्यून प्रतिशतले बढेको छ । नेप्सेमा काराबोर रकम रू. ५३ करोड ६६ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण घटेर रू. १४ खर्ब ७३ अर्बमा सिमित भएको छ । यस दिन बीमा समूह र होटल समूहको परिसूचक उच्चदरले घटेको छ । नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीमध्ये जम्मा ५ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेको, १ सय १६ कम्पनीहरुको मूल्य घटेको छ भने २ कम्पनी स्थिर रहेको छ । दिनभरिमा १ सय २३ कम्पनीको ५ हजार ६ सय ४९ पटकको व्यापारबाट ११ लाख २६ हजार ४ सय ६५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
बीमा समूहको परिसूचक ८ दशमलव ७ प्रतिशत र होटल समूहको ७ दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक ५ दशमलव ४८ प्रतिशत, बैङ्किङको ४ दशमलव ६३ प्रतिशत र जलविद्युतको ४ दशमलव ५१ प्रतिशत, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक ३ दशमलव ४१ प्रतिशत र ‘अन्य’ समूहको २ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको हो ।